Ithemu Lokuthenga Nama-FAQ - IPandawill Technology Co., Ltd
Ngabe iPandawill i-oda kanjani izinto zama-oda we-Turn-Key?
Si-oda isikweletu sakho ngqo sezinto ezibonakalayo uku-oda okungu-5% noma okungu-5 ngaphezulu kwezinto eziningi. Kwesinye isikhathi sibhekene nama-oda amancane / amaningi lapho kufanele kuthengwe izingxenye ezengeziwe. Lezi zingxenye kuyabhekwana nazo, nemvume etholwe kumakhasimende ethu ngaphambi koku-oda.
Emisebenzini ebalulekile, yini iPandawill eyenzayo ngokuwela ingxenye noma ukufaka okunye esikhundleni?
IPandawill ingasiza ukubamba impahla, kepha ngeke sifake ezinye izingxenye kumbhili wakho wezinto ngezingxenye esivele sinazo. Singaphakamisa iziphambano noma sisize ekukhetheni izinto uma kunesidingo, kepha sizothumela ishidi ledatha ukudinga ukuvunywa kwamakhasimende ngaphambi koku-oda.
Siyini isikhathi sokuhola ku-oda lokhiye wokujika?
Isikhathi sokuhola se-1.Procurement sengezwe ezikhathini zokuhola zomhlangano.
2.Uma si-oda amabhodi wesifunda, ezimweni eziningi lesi yingxenye yesikhathi sokuhola ende kunazo zonke, futhi kunqunywa izidingo zamakhasimende.
Zonke izingxenye kufanele zitholwe ngaphambi kokuqala ingxenye yomhlangano ye-oda.
Ngabe iPandawill inga-oda izingxenye nje noma ibhodi lami lesifunda?
Yebo, singakwazi uku-oda nje lokho odinga ukuthi sikunikeze khona, futhi ungakunika okusele. Sibhekisa kulolu hlobo lwe-oda njengomsebenzi okhiye wokujika ongaphelele.
Kwenzekani ezingxenyeni ezisele kuma-oda we-Turn-Key?
Izinto ezinezidingo zokuthenga eziphansi ziyabuyiselwa nama-PCB aqediwe noma iPandawill isiza ukubamba uhlu njengoba kuceliwe. Zonke ezinye izinto azibuyiselwa kukhasimende.
Yini engidinga ukuyithumela i-oda lokhiye wokujika?
I-1.Bill yezinto ezibonakalayo, ephelele ngolwazi ngefomethi evelele.
Ulwazi olugcwele lubandakanya - igama lomkhiqizi, inombolo yenxenye, abaklami be-ref, incazelo yento, ubuningi
Amafayela we-Gerber aphelele
Idatha ye-4.Centroid - leli fayela lingadalwa yiPandawill uma kudingeka.
Kuthiwani ngezinto ezithinta umswakama?
Amaphakheji wezinto ze-SMT amaningi amunca umswakama omncane ngokuhamba kwesikhathi. Lapho lezi zingxenye zidlula kuhhavini ogcwalisa kabusha, lowo mswakama ungakhula futhi ulimaze noma ubhubhise i-chip. Kwesinye isikhathi umonakalo ungabonakala ngokubonakalayo. Kwesinye isikhathi awukwazi ukuyibona nhlobo. Uma sidinga ukubhaka izinto zakho, umsebenzi wakho ungabambezeleka kufika emahoreni angama-48. Lesi sikhathi sokubhaka ngeke sibheke ngesikhathi sakho sokuphenduka.
2.Silandela izinga le-JDEC J-STD-033B.1.
Lokho kusho ukuthi uma leyo ngxenye ibhalwe ukuthi iyazwela umswakama noma ivulekile futhi ayinalo ilebula, sizonquma ukuthi idinga ukubhakwa noma sikushayele ukuthola ukuthi idinga ukubhakwa yini.
4.Ekuphendukeni kwezinsuku ezi-5 nezili-10, lokhu kungenzeka kungabangeli ukubambezeleka.
5. Emisebenzini yamahora angama-24 nengama-48, isidingo sokubhaka izingxenye sizodala ukubambezeleka okufika emahoreni angama-48 angeke kubalwe ngesikhathi sakho sokushuna.
6.Uma kungenzeka, hlala usithumelela izinto zakho ezivaliwe emaphaketheni owatholile kuwo.
Ngidinga kanjani ukunikezela ngezinto?
Isikhwama ngasinye, ugqoko, njll. Kufanele kumakwe ngokusobala ngenombolo yengxenye efakwe ohlwini lwezinto zakho.
1.Kuya ngenkonzo yomhlangano oyikhethayo, singasebenza nge-cut tape yanoma ibuphi ubude, amashubhu, amasondo kanye namathileyi. Sicabanga ukuthi ukunakekelwa kuzothathwa ukuvikela ubuqotho bezinto.
Izingxenye 2.If umswakama noma static ebucayi, sicela upake ngokufanele ku static elawulwa kanye / noma uphawu emaphaketheni.
Izingxenye ze-3.SMT ezihlinzekwe zikhululekile noma ngobuningi kufanele zibhekwe njengokubekwa kwe-thru-hole. Kufanele uhlale uqinisekisa nathi kuqala ngaphambi kokucaphuna umsebenzi onezakhi ze-SMT ezikhululekile. Ukukuthumela ngokukhululekile kungadala umonakalo futhi kungenzeka kukukhokhele ngokwengeziwe ekuphatheni. Cishe kubiza njalo ukuthenga umucu omusha wezinto bese sizama ukuzisebenzisa zikhululekile.